ဘဏ်လုပ်ငန်း - Marquette Capital Bank Inc
ဘဏ်လုပ်ငန်း - သင်၏ကုမ္ပဏီကိုတည်ဆောက်ပြီးသင်၏စီမံကိန်းကိုချဲ့ပါ။
Marquette Capital Bank စီးပွားရေးချေးငွေဆိုင်ရာပဏာမခြေလှမ်း ....
Marquette Capital Bank ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာသင်ဆုအစီအစဉ်သည်ကျောင်းသားများအားအလယ်တန်းလွန်ပညာရေးအတွက်ကျူရှင်အတွက်ကူညီရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အတူကြည့်ရှုသည့်ဌာနသစ်
Evolve Trust & Automated Talk2Teller မှပေးသောဘဏ်လုပ်ငန်းဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို MarquetteCapitalBank.com နှင့်အခြားများစွာတို့မှစီမံပါ။
Marquette Capital ဘဏ်အဟောင်း - ၁၉၉၉
ဘဏ်လုပ်ငန်း - သင်၏အကောင့်အသစ်အတွက်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပြီး Marquette Capital Bank မိသားစုသို့ ၀ င်ပါ။2မိနစ်သာဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည်။
Marquette Capital ကိုဘဏ် Inc မှ~ - ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 23, 1999 အတွက်တစ်ခုတည်းရုံးနှင့်အတူစီးပွားရေးအရင်းအနှီးနှင့်အကြွေးဌာနခွဲဘဏ်အဖြစ် Ostend (ဘယ်လ်ဂျီယံ)။ လက်ရှိတွင် Marquette Capital Bank သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ရုံးခန်းများစွာရှိသည် အလက်စကာ | တူရကီ | ယူအေအီး ဘီလာရုစ်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အညီ Marquette Bank သည်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအား Debit ကဒ်များ၊ ATM စက်များနှင့်အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။~.
two-factor authentication အင်တာနက်ပေါ်မှသင်၏အကောင့်ပရိုဖိုင်းအချက်အလက်ထဲသို့ဝင်ပါ~ ဘဏ်လုပ်ငန်း, သင်သည်အွန်လိုင်းအကွာအဝေးကိုအတည်ပြုရန် SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် ဘဏ်လုပ်ငန်း လှုပ်ရှားမှုများ။ Two-Factor Authentication (2FA) နှင့် SMS လှုပ်ရှားမှုသတိပေးချက်များသည်အကာအကွယ်အတွက်အပိုဆောင်းအလွှာတစ်ခုဖြစ်သည် Marquette Capital ကိုဘဏ် အွန်လိုင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း လှုပ်ရှားမှုများ။
သင်သွားလေရာရာ၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ .. Marquette Capital Bank အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဖြင့်သင်၏ငွေများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာစီမံခန့်ခွဲရန်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များသည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရှိသည်။ ငွေပေးချေခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ငွေတောင်းခံခြင်း၊ ခရက်ဒစ်နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ထိန်းချုပ်မှုသည်ရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံမှုရှိသည်~.
ငွေချေးတာက အကြီးကြီးပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီရန် အသင့်ရှိပါသည်။ သင့်အား စတင်ရန်အတွက် ဂဏန်းတွက်စက်များနှင့် နှုန်းထားဇယားများမှ၊ အတွေ့အကြုံရှိ ချေးငွေအရာရှိများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ Marquette Capital Bank သည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ချေးငွေမေးခွန်းများအတွက် အဖြေများရှိပါသည်။ မင်း အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ပါသည်။ Zero Interest ချေးငွေအတွက်~။ loan@marquettecapitalbank.com သင်၏အဆိုပြုချက်ကိုဆက်သွယ်ပါ
7x ရရှိနိုင်ပါသည် အ တစ်နိုင်ငံလုံးပျမ်းမျှ၊ ရန်ပုံငွေများကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ရန်၊ လစဉ်ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေမရှိပါ။ ၂၄/၇ လုံခြုံပြီး ချီးမြှင့်-အနိုင်ရဘဏ်လုပ်ငန်း~; GTCA အာမခံထား; ခြောက်လကန့်သတ်ချက်…
ဘဏ်ခွဲနှင့် ATM စက်များ
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ VISA သို့မဟုတ် MasterCard လိုဂိုများနှင့် ATM စက်များကိုသုံးသည့်အခါ Marquette Capital Bank ၏အကြွေးကဒ်များသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအားတရားမျှတပြီးတန်းတူညီမျှဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ရပ်တည်သည်~ ကျား၊ မ၊ အသက်၊ အယူဝါဒနှင့်နိုင်ငံသားမခွဲခြားဘဲကလေးသူငယ်များ။
ကျား၊ မ၊ အသက်၊ ယုံကြည်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများအားမျှတစွာတန်းတူဆက်ဆံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှရပ်တည်သည်။ ဒီလမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့တောင်မှပဲငါတို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအကြွေးနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာအကန့်အသတ်နဲ့ခံနေရတာကိုအများကနားလည်သဘောပေါက်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောနာကျင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအသိုင်းအဝိုင်းများကိုအားဖြည့်ပေးရန်စုပေါင်းလိုအပ်ကြောင်းပြသသည်~ နှစ် ဦး စလုံးဒေသခံနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်မှာ။ Marquette Capital Bank Inc သည်ထိုဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ကြေငြာချက်သည်“ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကိုခိုင်မာစေသည့်ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရန်” စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်ယုံကြည်မှုနှင့်မျှတမှုအခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Marquette Capital Bank မှကျွန်တော်တို့ကိုသူများ~ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီထက်ကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းကို လွှမ်းမိုးသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းများ၏အားသာချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုသတ်မှတ်ထားသောထူးခြားသောနောက်ခံများဖြစ်သည်။ Marquette Capital Bank တွင်လူတိုင်းကိုကြိုဆိုပြီးလေးစားမှုရှိစေလိုသည်။ စာနာနားလည်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်လိုအပ်လာသောအခါအချင်းချင်းမှီခိုရန်သင်ယူရန်အတွက်အချိန်ယူပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဆိုရန်အရေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဖြစ်ရပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုခဏတာအချိန်ယူကာသင်၏ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဂုဏ်ယူစေမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့လျှင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်မှုရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်အနာအဆာမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်စင်ကြယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္communitiesာရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသုံးသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဆက်လက်နားထောင်သွားမည်ဖြစ်သည်~ဤနေရာတွင်နေထိုင်ရန်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်၊ ကစားရန်နှင့်ဆုတောင်းရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်စေရန်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ။
ငွေရေးကြေးရေးဖြစ်ရန်~ အလားအလာရှိသောလွတ်လပ်သောကမ္ဘာ့ဘဏ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသောရပ်ရွာလူထုများ၏ဘ ၀ အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
၀ န်ထမ်းများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်ရပ်ရွာလူထု၏သစ္စာရှိမှုကိုအစဉ်မပြတ်သမာဓိရှိစွာဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်။
ဖောက်သည်ကိုလုံး ၀ အာရုံစိုက်သည့်အပြုအမူကိုပြသရန်နှင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာရောက်ရှိနေရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ၀ န်ထမ်းများရှိရန်။
အရောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွေးအခေါ်၏မောင်းနှင်အားဖြင့်များပြားလှသည့်ထုတ်ကုန်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၏အတွေးအခေါ်များကိုဖိတ်ခေါ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးမည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထိန်းသိမ်းထားပါမည်~နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးသည်~.
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသောလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းအတွက်ကတိကဝတ်ပြုခြင်း
စတင်ခဲ့သည် uly 23, 1999 in Cunda (Alibey) ကျွန်း တူရကီ၏။
Marquette Capital Bank Inc သည်အရှေ့ဥရောပ Bancorporation, Inc ၏အစုရှယ်ယာလက်အောက်ခံဖြစ်သော Heritage အရှေ့ဥရောပဘဏ်၏ဌာနဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆက်ဆံရေးကဏ္ Relations သို့လာရောက်ပါ.
Marquette Capital Bank Inc သည်စတင်လှုပ်ရှားခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 23, 1999 အတွက်တစ်ခုတည်းရုံးနှင့်အတူနိုင်ငံခြားဘဏ်၏ဌာနခွဲအဖြစ် Cunda (Alibey) ကျွန်း တူရကီ၏။ လက်ရှိတွင် Marquette Capital Bank သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနောက်ထပ်အချက်သုံးချက်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုံးများဖွင့်လှစ်ထားသည် အလက်စကာ | ယူအေအီး ဘီလာရုစ်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများအတိုင်း Marquette Bank သည်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအား Debit ကဒ်များ၊ ATM စက်များနှင့်အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Marquette Capital Bank Inc သည်စတင်လှုပ်ရှားခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 23, 1999 အတွက်တစ်ခုတည်းရုံးနှင့်အတူနိုင်ငံခြားဘဏ်၏ဌာနခွဲအဖြစ် Cunda (Alibey) ကျွန်း တူရကီ၏။
လက်ရှိတွင် Marquette Capital Bank သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနောက်ထပ်အချက်သုံးချက်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုံးများဖွင့်လှစ်ထားသည် အလက်စကာ | ယူအေအီး ဘီလာရုစ်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများအတိုင်း Marquette Bank သည်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအား Debit ကဒ်များ၊ ATM စက်များနှင့်အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Marquette Capial Bank Inc ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ကုမ္ပဏီ၏မျှော်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်များအားကမ္ဘာ့အဆင့်မီဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုသေချာစေရန်နှင့် Marquette Capital Bank ၏ထူးခြား။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။
Marquette Capital Bank မှပုံပြင်များ
ပြင်းထန်သော COVID ရောဂါဖြစ်ပွားမှု 500 အနီးတွင် ဖြစ်သောကြောင့် Green Pass ကို အဆုံးသတ်ရန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက တောင်းဆိုထားသည်။
ဇန်နဝါရီလ 18, 2022by MARQUETTE
Solana အခြေစိုက် Burnt Finance သည် Animoca Brands ဦးဆောင်သော ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၈ သန်း ရခဲ့သည်။
Bajaj Finance Q3 ရလဒ်များ- အသားတင်အမြတ် 84% ရူပီး 1934 cr သို့ ခုန်တက်သွားသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအရည်အသွေး မြှင့်တင်ပေးသည်။